ပင်လယ်နက်ဒေသကြီးမော်ကွန်း - ထို rayhab
ကမ်းခြေမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေး Riz စင်တာဖိအားအောက်မှာရွှံ့ဖြစ်ခြင်းဟာပြန်လည်ကောင်းမွန် footpath ကွန်ကရစ်အလုပ်ဖြတ်သန်းနေဖြင့်ပြန်လည်ကောင်းမွန်နေကြသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်များ၏နယ်ပယ်အလုပ်တမြို့လုံး၏ကွဲပြားခြားနားသောအချက်များမှာ Rize မြူနီစီပယ်အဖွဲ့များအတွက်စတင်ပါကအောက်ပိုင်း viaduct တည်ရှိသော footpath ၏ပြုပြင်မှပေးထားခဲ့သည်။ [ပို ... ]
ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်နှင့်ပြည်တွင်းဧည့်သည်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှု၏အာရုံဖြစ်လာသည့် Cable ကိုကားလိုင်း, မနက်စောစော Al-Adha စဉ်အတွင်းပြောင်းပြန်ကြပါတယ်။ စစ်တပ်ကမြို့မြို့တော်ဝန်ကဆိုသည်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Boztepe ထောက်ပံ့သောကေဘယ်လ်ကားလိုင်းဆန့်ကျင်ဘက်အိမ်တော်ဆွဲဆောင်မှုတိုးမြှင့် [ပို ... ]
TEM ကားလမ်းKaynaşlıဖွင့်လှစ်ပြီးနောက် 4.5 လအတွင်း Tolls
အဆိုပါလေ့လာမှုပြီးစီးပြီးနောက်အဆိုပါတံခါးပိတ် TEM အဝေးပြေးလမ်းမကြီးဖြတ်သန်းခကွန်နက်ရှင်DüzceKaynaşlıနိုင်ငံသားများ၏ဝန်ဆောင်မှုမှာမနေ့ကညဦးယံအချိန်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကွန်နက်ရှင်အလုပ်အတွက်အဝေးပြေးနှင့်တံတားများအားဖြင့်ဖျော်ဖြေKaynaşlı TEM အဝေးပြေးလမ်းမကြီးလမ်းဆုံ Connection ကိုအပြီးသတ်ခဲ့သည်။ မတ်လ 15 2019 [ပို ... ]
ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Inc လက်အောက်ခံ ORBEL Çambaşıကုန်းပြင်မြင့်ခရိုင်အတွင်းရှိ2တထောင် Kabaduz ၏အမြင့်ပေါ် မူတည်. လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလေ့ကျင့်ရေးမှဆောင်းရာသီအားကစားနှင့်နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာန်ထမ်းပေးထားခဲ့သည်ကို run ။ ဆောင်းရာသီအားကစားနှင့်နှင်းလျှောစီး Center ကကျင်းပ [ပို ... ]
မကြာသေးမီကာလ၌သူကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တိုးမြှင့်အသွားအလာမတော်တဆမှုသတိပေးထားပါတယ်ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနတစ်ခုသတိပေးပိုပြီးယင်း၏နိုင်ငံသားများများအတွက်အသွားအလာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ drivers တွေကိုလိုက်နာပါရှိသည်။ သငျသညျအသွားအလာဥပဒေများကိုလိုက်နာရမည်! ယာဉ်အသွားအလာမတော်တဆမှုများအများစု၏ overspeed, [ပို ... ]
Samsun Amisos ဟေးလ် Cable ကိုကားလိုင်းကို Maintenance အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း
Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်SAMULAŞအနောက်ပန်းခြံအတွင်းရှိကေဘယ်လ်ကားများ၏အော်ပရေတာ, ကြိုး, ပေါ်ကို roller, ကောင်းကင်ကြိုးအပေါင်းတို့နှင့် Electro-စက်မှုစနစ်များကို '' အကြီးစား Maintenance've တယ်ရန်။ cable ကိုကားတစ်စီး၏လှုပ်ရှားမှုများလုံးဝရပ်တန့်နေသည်, နာရီတို့သည် 13.00 23.00 တို့တွင်အစေခံရန်ဆက်လက် [ပို ... ]
ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan ခရိုင်ဆိပ်ခံပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ, လမ်းဌာနခွဲအတွက်အသွားအလာမြို့နယ်မှကားမောင်းများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုသေချာစေရန်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆက်လက်ကြောင့်အသွားအလာပုပ္ပနိမိတ်နှင့်နေရာချထားမှုလုပ်ငန်းစဉ် refresh နေဆဲဖြစ်သည်။ ကျောက်ခင်းရှေ့တွင်နှင့်လမ်းပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်အပြင်အသွားအလာကျန်းမာစီးဆင်းမှုကိုသေချာစေရန် [ပို ... ]
5 စတားဟိုတယ်အခြေခံမှ CAMBAS ချွတ်ပို့
ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Inc လက်အောက်ခံ ORBEL နှင့်စီးပွားရေးလောက၏ကြည်းတပ်ကိုရေတွက်အမည်များနှင့်အတူပူးပေါင်းပြုလုပ်အဘိဓါန် Highland ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဘို့စီစဉ်ထား25 တထောင်မြင့်Çambaşıကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်ကစီးကျလာတယ်။ ထို့နောက်Çambaşıကုန်းပြင်မြင့်, ဆောင်းရာသီအားကစားနှင့်နှင်းလျှောစီး Center ကအသစ်တစ်ခု [ပို ... ]
ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ ကြိုတင်Ünyeဆိပ်ကမ်းများတွင်တွေ့ရသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ၏ပြင်ဆင်မှုဖို့တပ်မတော်၏ရူပါရုံစီမံကိန်းများကို "Ünyeဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်း" အကြားတည်ရှိသော Mehmet Hilmi Guler ။ ကြည်းတပ်ကိုပင်လယ်ထဲနှင့်စီးပွားရေး, လူမှုရေး, ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အဖွင့်ပွဲတက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကနေပိုပြီးအကြိုး [ပို ... ]
ဘတ်စ်ကား Term မှာSAMULAŞက Black Box ကိုစတင်
ပြီးခဲ့သည့်အကယ်ဒမီကျူတိုရီရယ်အတွက် Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်လုပ်ငန်းများ၌ခံရsamulaşဘတ်စ်ကားစက်ရုံ '' ချွေ, ကို Safe, Comfortable ခရီး '' themes များရဲ့ start သည်။ စုစုပေါင်း 110 ဘတ်စ်ကားနိယာမအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသောပေးသောဝန်ဆောင်မှု၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရည်အသွေးတိုင်းဧရိယာ '၌' 'ယာဉ်ပေးပို့စနစ်များ (က Black Box ကို) စနစ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်' 'အထွေထွေမန်နေဂျာ Tamgac, [ပို ... ]
Samsun Amisos ဟေးလ် cable ကိုကားတစ်စီးနာရီစောင့်ရှောက်မှုပြင်ဆင်မှုအား
အဆိုပါ Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်Samulaş Inc ကိုပေါ် မူတည်. Amisos ဟေးလ်, 320 လိုင်းပါဝင်ပါသည်ရာနှစ်ခုမီတာရှည်လျားကေဘယ်လ်ကားဘူတာရုံအားဖြင့် operated ပိုလုံခြုံနှင့်အရည်အသွေးန်ဆောင်မှုများပေးရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် 23.07.2019 အပေါ်စီစဉ်ထားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပျငနျးSamulaşဖြင့်ကြေညာချက်başlatılılလျက်ရှိ၏ [ပို ... ]
ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးမိုးပျံ7၏စာရင်းများတွင် Yusuf ဆည်။ Compact တန်းစီဖို့ရှိပါတယ်
မီတာအတွက် Coruh Yusuf ဆည် 270 ခန္ဓာကိုယ်အမြင့်ကမ္ဘာကြီးကို7စာရင်းထဲတွင်အမြင့်ဆုံးရေကာတာအပေါ်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူကအမိန့်အခြေချနေထိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Coruh မြစ်, ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးရေကာတာ7စာရင်းတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကောင်းစွာ Yusuf ဆည်, အအခြေချ [ပို ... ]
ကြည်းတပ် Boztepe ကေဘယ်လ်ကားစျေးနှုန်းများ, နာရီနှင့်တည်းခိုခန်း
ကြည်းတပ် Boztepe ကေဘယ်လ်ကားလိုင်း, ပင်လယ်နက်နှင့်အကျော်ကြားဆုံးခရီးသွားဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လမ်းမှာသွားရောက်လည်ပတ်ဧည့်သည်များကကြိုဆိုကြောင်းတိုက်ရိုက်နှင့်အရေးကြီးသောနှစ်ဦးစလုံးခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်တာနှင့်အတူတပ်မတော်ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေလမ်း, သဘာဝအလှအပနှင့်ရှုခင်းများ၏အလယ်တွင်တည်ရှိသည်။ [ပို ... ]
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်Ünyeဆိပ်ကမ်းနှင့် Cruise နဲ့ဆိပ်ကမ်းသည်စတင်
ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mehmet Hilmi Guler, ကြည်းတပ်၏ရူပါရုံအကြားရွေးချယ်မှု၏ဂတိနှင့်စီမံကိန်းများကို Unye ဆိပ်ကမ်းတည်ရှိပြီးနှင့်ရွှေ Cruise နဲ့ဆိပ်ကမ်းများအတွက်အလုပ်လုပ်စတင်ခဲ့သည်။ စစ်တပ်ထက်ပိုမိုအကျိုးခံစားရဖို့ပင်လယ်, စီးပွားရေး, လူမှုရေး, [ပို ... ]
Samsun, Sivas (Bold) မီးရထားလိုင်းပြန်လည်
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Salih Ayhan နှင့်မြို့တော်ဝန် Hilmi Bilgin, မဟာခေါင်းဆောင် Mustafa Kemal Atatürkရဲ့ Samsun, Sivas (Bold) မီးရထားလိုင်း၏အခြေခံ 88 နှစ်ပေါင်းပစ် ချ. ဖွင့်လှစ်,4လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) ထောက်ပံ့ငွေနှင့်ခေတ်မီရေး၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ဖွင့်လှစ် [ပို ... ]
စက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Mustafa Varank, Filyos စက်မှုနှင့်သူတို့အရည်အချင်းပြည့်မီသံနှင့်သံမဏိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဆိပ်ကမ်းဒေသကြီးများအတွက်စင်တာဖြစ်လာလိုကြောင်းပြောသည်, "ဤတွင်, တူရကီရဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ထုတ်လုပ်စီးပွားရေးမှာကျနော်တို့အရေးကြီးဆုံးဂေဟစနစ်တစ်ခုဖြစ်လာချင်တယ်။ " သူကဆိုသည်။ [ပို ... ]
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း Amasray ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်
မြို့အလွမ်းဆွတ်လမ်းရထားစီမံကိန်းကြောင့်ဖန်ဆင်း Amasya မြူနီစီပယ်စီစဉ်ထားနှင့်ဧရိယာများအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Amasya မြို့တော်ဝန် Mehmet အဝါရောင်, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Ahmet Yenihan မြို့တော်ဝန်, ဒုတိယမြို့တော်ဝန်အစ္စမေးလ်အနိုင်ရရှိ, သိပ္ပံနဲ့ရေးရာအလီ၏ဒါရိုက်တာပုဂ္ဂလိက, [ပို ... ]